‘सास्ति बन्दै काठमाडौंको धुलो’ - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
तपाई राजधानी काठमाडौं लगायतका शहरहरुमा नाक, मुख खुल्ला छोडेर एकैछिन यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपार्इँ केही घण्टामै रुघा खोकिको शिकार बन्ने निश्चित छ । किनकी यहाँ भइरहेको सडक निर्माण कार्यबाट निस्केको धुलो, धुवाँ यो बदलिँदो मौसममा हामी जो कोहीलाई चुनौति बनेको छ । दिनप्रतिदिन सडकमा उडिरहेको धुलोले वातावरण प्रतिकूलसँगै दैनिक जिवन यापन गर्न पनि समस्या उत्पन्न भईरहेको छ ।
यतिबेला राजधानी काठमाडौ लगायत मुख्य सहरहरुमा यसरी धुलो उड्न कुनै हावा हुन्डरी आउनै पर्दैन । यो त पछिल्लो वर्षदेखि चौविसै घण्टा यसरी नै उडिरहेको छ । मानिसका लागि सास्ति बन्दै काठमाडौंको धुलो । मौसम बदलिँदो छ, गर्मी ह्वात्तै बढेको छ । त्यसै पनि रुघा खोकीको विगविगी हुने मौसाम हो । अझ सडकमा चौविसै घण्टा यसरी उड्ने यो धुलोले जो कोही मानिसको स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको छ । यही कारण अस्पतालमा विरामीहरुको चाप एवं रितमा बढ्दो छ । त्यसमा पनि रुघा खोकी र नाक कान घाटीकै समस्या बोकेर जानेहरु धेरै छन् । यो विकास निर्माण सम्बन्धि व्यवहारीक योजना र ठेकेदार कम्पनीको हेलचेक्राईका कारण सृजना भइरहेको संरचना हेर्दा सामान्य तर विकराल समस्या हो ।
मौसम प्रतिकूल विकास निमार्णका कामलाई तिव्रता दिईनु तथा ठेकेदार कम्पनीले यो समस्यालाई न्युनीकरण गर्न ध्यान नदिनुले यो ठुलो समस्या बनेको हो । विभिन्न सञ्चार माध्यमले यो वास्तविकतलाई बाहिर नल्याएका पनि हैनन् । राज्यका निकाय र निर्माण कम्पनीले यो नबुझेका पनि हैनन् । तर सामान्य आर्थिक क्षतिको लोभमा लाखाँै मानिसको ज्यान बाजि लगाइरहेका छन् । निर्माण समयमा धुलो नउड्ने गरी सडक निर्माण स्थलमा पानीको प्रयोग गर्ने । ओसिलो बनाउने जथाभावी निर्माण सामाग्री नथुपार्ने हो भने पनि यो केही समस्या हैन । तर राज्यका निकाय ती ठेकेदार कम्पनीसँग कमिसन माग्न नै लिप्त छन् भने निर्माण ठेकेदार कम्पनी रकम जोगाउनमा नै मस्त छन् । यसको मार भने सोझै रुपमा जनताले भोगिरहेका छन् ।
मुलुकका शहरहरुको वातावरण प्रदूषणको प्रमुख कारण यही मात्र भने, हैन डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन पनि हुन् । पिचभन्दा धुलो उड्ने सडक, नयाँ भन्दा पुरानो, पेट्रोलभन्दा डिजल, साना भन्दा ठूला, खालीभन्दा लोडेड र सरासरी भन्दा रोकी–रोकी हिड्ने गाडीहरुले वातावरण बढी प्रदूषित गर्छन् । ग्यास र बिजुलीबाट चल्ने साधनले धुवाँ नगण्य फाले पनि साधनका ब्रेक लाइनिङ र टायर खिइदा प्रशस्त धुलो फैलिन्छ जसमा फोहरको धलो, नाइट्रोजन डाइअक्साइड बेन्जीन, कार्बन मोनोअक्साइड, ओजन, लीड तथा ब्ल्याक सुट धुवाँ प्रमुख एलर्जी गराउने तत्व हुन् । हावामा उडिरहने र तैरिरहने गाडीको धुवा र टायर तथा ब्रेक खिइएर निस्कने धुलो र प्रदूषणले दम खोकी बाहेक फोक्सोको क्यान्सर, गर्भवती महिलालाई प्रभाव पारेर बच्चा समयभन्दा चाडो जन्मने र कम तौल हुने, दम खोकीले फोक्सो र पछि गएर मुटु पनि फेल हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । त्यसैले राज्यका हरेक निकाय र आम नागरिकले यो बुझ्न जरुरी छ यो सामान्य समास्या हैन । यो दिर्घकालिन र विकराल समस्या हो तसर्थ यसको न्युनीकरण र समस्याबाट बच्न सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।
धराप र पासो बन्दै शहरका संरचना
दूर–दराजमा बस्ने मानिस देशको राजधानी काठमाडौँ भन्ने वित्तिकै सुन्दर र लोभलाग्दो सहरको कल्पना गर्छन् । कसैका लागि काठमाडौँ सपनाको सहर हुनसक्ला तर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको जनघनत्व, सवारीको चाप, अव्यवस्थित बसोबास, सडकको दुरावस्था लगायतका कारण उपत्यका बाहिरबाट परिकल्पना गरिएजस्तो छैन, काठमाडौँ शहरको अवस्था । यहाँको अव्यवस्थित विकास निर्माण मानिसका लागि पासो सावित बनेको छ । सडकमा बनेका अदृश्य खाल्डो, सडक किनारामा बनेको भौतिक संरचना, सडककै छोउमा यसरी माकुराको जालो झँै बेरिएका तारहरु देख्दा लाग्छ ! मानिसका लागि थापिएका धराप जस्तै देखिन्छन् ।
जुनसुकै बेला जतिसुकै चोटिलो पासोमा मानिस फस्न सक्छ जसले ज्यान पनि लिन सक्छ । हावा हुन्डरीको मौसमा धराप तरिकाले टाँगिएका होडिङबोर्ड अनि सडक सम्म लत्रेका तारहरु मानिसका लागि गलपासो नबन्लान् भन्न सकिन्न । भवितव्य टारेर टरिन्न तर पासो र धराप हटाउने हो भने, त्यसको न्युनीकरण भने अवश्य गर्न सकिन्छ । माकुराको जालो झँै गुजिल्टएको तार जतिबेला पनि सडकमा झर्न सक्छ । यदि त्यस्तो भयो भने गुडिरहेको सवारी साधनका मानिस र पैदल यात्रा गर्नेहरुको लागि गलपासो बन्दैन? त्यसैगरी ढल र खानेपानिका लागि सडक आसपासमा बनाइएका अदृश्य खाडलहरु मानिसका लागि धराप बन्न सक्दैनन् कसले भन्न सक्छ ?